९ वर्षमा जीडीपीमा आयकरको अनुपात दोब्बर | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट ९ वर्षमा जीडीपीमा आयकरको अनुपात दोब्बर
प्रडक्ट0views
९ वर्षमा जीडीपीमा आयकरको अनुपात दोब्बर
काठमाडौं (अस) । पछिल्ला वर्षहरूमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयकरको हिस्सा बढ्दै गएको देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आव २०६५/६६ मा २ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा रहेको आयकर ९ वर्षपछि ५ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको देखिएको हो ।
अर्थतन्त्रमा आयकर बढ्नुलाई सकारात्मक मानिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । यसले आम्दानीको स्तर बढेको र आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक बाटोमा आएको देखाउँछ ।
चालू आवको असोज महीनामा सरकारले आयकरबापत रू. ३ अर्ब असुली लक्ष्य लिएकोमा रू. ५ अर्बभन्दा धेरै असुली गरिसकेको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो । यसमा रू. ४ अर्ब ५३ करोड आयकर, रू. २७ करोड घर बहाल कर र रू. १८ करोड ब्याजकर रहेको छ ।
विभागको तथ्याङ्कमा यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अन्तःशुल्कको अनुपात पनि दोब्बर नै भएको देखिएको छ । आव २०६५/६६ मा १ दशमलव ६ प्रतिशत हिस्सा रहेको अन्तःशुल्क चालू आवमा बढेर ३ दशमलव २६ पुगेको छ । अन्तःशुल्क बढेको अनुपातले आयात बढेको देखाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट भने सुस्त गतिमा बढेको छ । ९ वर्षपहिले ४ प्रतिशत हिस्सा लिएको भ्याटले हाल ६ दशमलव १७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १०:१६
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १०:१५
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १०:०५